Budata IRIS P-40 Warhawk FSX - Rikoooo
downloads 11 256
Iris bụ mpako-eweta iconic P-40 Warhawk! Iris akwadawo ọhụrụ ala na Warhawk site n'inye nkọwa zuru ezu replications nke P-40E, P-40F, P-40L, P-40N, na ejima oche TP-40N ọzụzụ.
Mara na Commonwealth ikuku agha dị ka Kittyhawk, na P-40 Warhawk bụ na ka a na-ahụ
site ọtụtụ dị ka otu n'ime kpochapụwo alụso of WWII.
The P-40 Warhawk abịa na a ngụkọta nke 22 elu àgwà textures ekpuchi ụfọdụ n'ime ọtụtụ mba na-ama na P-40, dị ka United States Army Air Force, ndị Royal Air Force na Royal Australian Air Force ndị a bụ nanị ole na ole.
-Abịa ihe magburu onwe virtual kokpiiti na kpamkpam 3D gauges. Nke a nlele technology na-enye ohere maka n'ụzọ zuru okè ire ụtọ gauges na ugbo elu na ime ihe na ma ndị otu na ejima oche ugbo elu, na dị ka a agba na nkwupụta a, ị
nwekwara ike ịhụ gauges akpụ akpụ site na mpụga nke ụgbọ elu na mputa anya na-enweghị ọnwụ na àgwà!
The Virtual kokpiiti abụghị naanị ihe ndị e rụsiri ọrụ ike on, ndị textures bụ ndị mbụ ọnụego na-Njirimara authentic weathering dị ka hụrụ na ọtụtụ nke oge agha P-40 si, gbakwunyere na mputa ụdị bịa na mmanụ ụgbọala tankị, bombs ma ọ bụ a crisp ọcha ibu-esi dabere na otú ị chọrọ ofufe.
The ụgbọ elu ụdị e gbanwee ka ona dị iche iche variants nke P-40, ma ị na-efe efe ndị okenye E nlereanya ma ọ bụ ndị ọhụrụ apụta Royce Merlin kwadoro P-40L, onye ọ bụla ụgbọelu e mere na-onye ugbo elu na nkọwa.